Ebe a na-eli ozu nke akwụkwọ ndị echefuru echefu: Zafón kachasị mma | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ebe a na-eli ozu nke akwụkwọ ndị echefuru echefu
John Ortiz | | Akwụkwọ, Akwụkwọ, Novela
Ebe a na-eli ozu nke akwụkwọ ndị echefuru echefu Ọ bụ tetralogy nke Carlos Ruiz Zafón dere na Barcelona. Usoro a bu ihe eji ede akwukwo akwukwo, nke mechara buru akwukwo ederede na akwukwo XNUMXst nke Spanish. Onye edemede ahụ kere akụkọ anọ a haziri nke ọma na nke kwụ ọtọ, nke ọ bụla nwere isi ya, mana n'ikpeazụ jikọtara onwe ha.
Ihe nkata ahụ gafere ihe omimi dị iche iche nke gbara ọgbọ atọ nke ezinụlọ Sempere na ụlọ ahịa akwụkwọ ya. Na mgbakwunye, mmepe nke akwụkwọ ọ bụla na-agụnye akwụkwọ enigmatic nke na-esetịpụ ọsọ nke akụkọ. Ihe niile na-agbakwunye site na mkpụrụ edemede a na-agaghị echefu echefu nke na-eme ka labyrinth nke akụkọ ifo na onye nwere akwụkwọ dere.
1 Tetralogy Ili ozu nke akwụkwọ ndị echefuru echefu
1.1 Onyunyo Ifufe (2001)
1.2 Egwuregwu nke mmụọ ozi (2008)
1.3 Onye Mkpọrọ nke Eluigwe (2011)
1.4 Labyrinth nke Mmụọ (2016)
Tetralogy Ili ozu nke akwụkwọ ndị echefuru echefu
Na 2001, Ruiz Zafón malitere usoro isiokwu a nke akwụkwọ akụkọ akwụkwọ akụkọ, onye anwansi ya malitere site na nnyefe nke ọma Onyunyo ifufe. Akwụkwọ ahụ meriri ọtụtụ nde ndị na-agụ akwụkwọ ozugbo, na-amalite ihe a maara dị ka: "zafonmanía". Na nke mbụ a, onye protagonist na nna ya meghere ọnụ ụzọ maka ihe omimi na ebe dị egwu: Ebe a na-eli ozu nke akwụkwọ echefuru echefu.
Ekem ke 2008, andiwet ama ewet Egwuregwu mmụọ ozi, otu akwụkwọ nke mebiri ihe na ndebe ya na Spain, nke nwere ihe karịrị otu nde. Afọ atọ mgbe e mesịrị, Onye Mkpọrọ nke Eluigwe (2011) sonyeere nchịkọta. Na 2016 Isiakwụkwọ ikpeazụ ga-abịa Labyrinth nke mmụọ. N'ime akwukwo ohuru a, ihe omuma a nile nke onye edemede dere mgbe o na-eke saga dabara.
Tetralogy Ileba La ...
Onyunyo ifufe (2001)
Ọ bụ ihe omimi na akụkọ ifo, nke onye edemede ji mepee usoro ndị a ma ama. Akụkọ a na-ekpughe na obodo Barcelona site na afọ 1945, onye isi ya bụ Daniel Sempere. Ndụ nke nwa okorobịa a gbanwere mgbe, ekele nna ya, ọ maara Ebe a na-eli ozu nke Akwụkwọ Ndị Echefuru echefu wee kpebie ịhọrọ ederede ahụ Onyunyo ifufenke Julián Carax dere.
Akụkọ ahụ na - adọrọ mmasị ya - na ịchọrọ ịmatakwu Carax -, Daniel malitere nyocha nke enyi ọhụrụ ya Fermín sonyere. Nchọgharị ahụ na-eduga ha n'okporo ụzọ a na-atụghị anya ya, ka ha na-aga n'ihu, ha na-enweta data na-adọrọ mmasị site n'aka onye edemede. N'ime ndị a, ihe gbara ọchịchịrị na Penelope Aldaya pụtara, nke mere ka nwoke a bụrụ onye gbara ọchịchịrị na onye owu na-ama.
Ka anyị gara n'ihu na ịjụ ajụjụ, ndụ ndị na-eto eto na-amalite ịnọ n'ihe ize ndụ. Ma, ọ dịghị ihe na-egbochi mmụọ ebumpụta ụwa nke obi ike Daniel na onye ibe ya kwesịrị ntụkwasị obi, onye ha anaghị ezu ike ruo mgbe ha kọwapụtara ihe omimi niile gbara Julián gburugburu. Otu a ka atụmatụ nke eziokwu na echiche efu gbara gburugburu, tinyere ngwakọta nke ins na outs, igbu ọchụ, mmekọrịta amachibidoro iwu na mmekọrịta enyi.
Ifufe ikuku ...
Egwuregwu mmụọ ozi (2008)
Ọ bụ enigmatic akwụkwọ akụkọ egwu nke ahụ na-eme na Barcelona nke afọ 20. Akụkọ na-akpali mmasị nwere dị ka onye na-ede akwụkwọ bụ David Martín onye na-ede akwụkwọ. Na ohere a, Ruiz Zafón mepụtara atụmatụ dị iche na akwụkwọ mbụ, ma na akuko di oke nma na nke oma nke na-eme ka onye na-agụ ya mikpuo onwe ya na anwansi na obi abụọ.
Nkata ahụ mere ka Devid cheta nwata ya dị mwute, mgbe ọ na-echeta ihe ịga nke ọma nke ọrụ ya Obodo ndi ebibiri, nke o bipụtara na akwụkwọ akụkọ Barcelona ama ama. Onye protagonist na-akọ otu ọ ga-esi nweta nnabata ahụ, ọ kwagara n'ụlọ obibi gbahapụrụ na zute Cristina (ya ibu). N’ebe ọhụrụ a, o dere ihe odide ndị ọzọ — gụnyere akwụkwọ nke ya —, kpebiri iduzi ndụ ya wee kpebie ịlụ ọmarịcha nwa agbọghọ a.
Otú ọ dị,, n'ihi ndakpọ olileanya dị iche iche, Onweghị ihe na-aga dị ka atụmatụ. N'ime ndakpọ olileanya, otu n'ime Cristinaonye nọ na onye ọzọ. Ọzọkwa, akwụkwọ ọhụrụ ya bụ fiasco, yIji gbakwunye mkparị na mmerụ ahụ, ọ mụtara nke ahụ nwere ajọ nsogbu ahụ ike.
N'oge ịda mba gị, Andreas Corelli kpọtụrụ David, ihe enigmatic ihe na-enye gị nnukwu nchikota nke ego na ọgwụgwọ ya n'ọnọdụ iji dee akwụkwọ na ozizi okpukpe ọhụrụ. Site n'oge ahụ, oke nsogbu dị egwu na-emetụta ndụ onye edemede.
N'ime ọdachi ndị ọhụrụ ahụ, Martín malitere nyocha, ebe ọ na-eche na ihe ọjọọ niile metụtara ọrụ nke ederede gbara ọchịchịrị. Ọtụtụ mmadụ ga-etinye aka n'okporo ụzọ a, dịka onye na-ere akwụkwọ Sempere na onye enyemaka ya nwere nghọta, Isabella. Ihe omume ọ bụla na-eduga David na akwụkwọ ahụ Lux Aterna, nke onye nwe ụlọ ochie ahụ dere ebe ọ bi, Maazị Marlasca.
Egwuregwu mmụọ ozi / The ...
Onye Mkpọrọ nke Eluigwe (2011)
Ọ bụ akụkọ jupụtara na nkwenye na aghụghọ, nke ọtụtụ ndị isi akụkọ a na-alaghachi azụ, dịka: Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres, David Martín na Isabella Gispert. Na mgbakwunye, onye dere akwukwo n’egosiputa ufodu ihe amaghi ama nke mere ka ndi n’agu akwukwo ghara ikwenye.
Ọtụtụ afọ agafeela, Daniel kpụrụ a ezinụlọ ya na Bea nwunye ya na obere Julian. Ugbu a, na-arụkọ ọrụ ọnụ na nna ya na enyi ya Fermin (isi agwa ibé) n'ime ụlọ ahịa akwụkwọ ezinụlọ: Sempere na ụmụ. Ebe a adịghị mma, ya mere, Daniel nwere obi ụtọ mgbe onye ahịa nwere nnukwu mmasị na akwụkwọ dị oke ọnụ pụtara: Ọnụ nke Monte Cristo.
Ka o sina dị, obi ụtọ ahụ ghọrọ ihe na-adịghị mma, ebe nwoke ahụ na-eme ajọ omume na-ewere akwụkwọ ahụ ma debe ihe edeturu: "Nye Fermín Romero de Torres, onye si n'ọnwụ lọta ma nwee isi ihe ga-eme n'ọdịnihu." Ozugbo onye ahụ ọ na-amabughị lara, Daniel na-eso enyi ya kọọrọ ya ihe merenụ. N'ihi, Fermín kọọrọ ha banyere ndụ ya gara aga ma kpughee ihe nzuzo dị egwu.
N'oge ahụ, akụkọ ahụ mere ọtụtụ afọ azụ, mgbe Fermín Oge onye mkpọrọ na ebe ndị agha wusiri ike nke Montjüic y zute David Martín. N’ebe ahụ ka Mauricio Valls — onye ntụzi ụlọ mkpọrọ na onye edemede na-enweghị isi — na-eyi Martín egwu wee jiri amamihe ya mee ihe. Site n'ebe ahụ ka ọbụbụenyi dị n'etiti Fermín na David mụrụ, onye nke ikpeazụ nyere ya ọrụ dị mkpa metụtara Daniel Sempere.
Onye Mkpọrọ nke Eluigwe ...
Labyrinth nke mmụọ (2016)
Ọ bụ nnyefe na-emechi usoro akwụkwọ akụkọ gbara gburugburu gburugburu Ebe a na-eli ozu nke akwụkwọ ndị echefuru echefu. Banyere, Ruiz Zafón kwuru, sị: "last nke ikpeazụ a bụ ọkacha mmasị m, ma eleghị anya ọ bụ n'ihi na ọ bụ ntakịrị nke lace mpempe, nke na-agbakwunye ihe niile ebiliri na nke ndị gara aga ”. Ma, n’ezie, ọ bụ akwụkwọ kachasị ogologo na zuru oke na saga niile, nwere peeji 900 na mkpokọta.
Alice Grey bụ nwanyị dị afọ iri abụọ na-echetakarị oge ọ bụ nwata, na etu esi eme ya lanarịrị egwu ọgụ nke Agha obodo Spanish. Ọ bụ 1958, nwa agbọghọ a dị oke egwu chọrọ ịla ezumike nká n'ọrụ ya, ka afọ iri nke ịbụ onye nyocha nke ndị uwe ojii nzuzo nke Madrid gasịrị. Mana tupu aghaghị rụọ ọrụ ikpeazụ: juo ase na efu efu nke Mauricio Valls, onye ozi nke gọọmentị Franco.
Alicia na Captain Vargas, onye ọrụ ibe ya na-eme nchọpụta ahụ. Mgbe ha na-enyocha ụlọ ọrụ nke ahụ furu efu, ha na-ahụ akwụkwọ nke Víctor Mataix dere. N'oge na-adịghị anya, ha jikọtara ya na oge Valls duziri Montjüic —ebe ebe a tụrụ ụfọdụ ndị edemede, gụnyere onye dere ya, mkpọrọ. Ndị ọrụ ahụ gbasoro ụzọ nke egwu a wee kwaga Barcelona iji nyochaa ọtụtụ ndị na-ere akwụkwọ, n'etiti ha bụ Juan Sempere.
Ka Alicia na-aga n’ihu n’ime nyocha ahụ, ọ na-ahụ ọtụtụ ihe ụgha, ịtọrọ mmadụ na mpụ site na nke ọchịchị Franco. Mgbe ha banyere n'ọtụtụ nrụrụ aka ahụ, ha na-etinye nnukwu ihe egwu, mana ha jisiri ike gbapụ n'enweghị nsogbu. All ekele maka eziokwu ahụ bụ na Alicia nwere nkwado nke ndị dị mkpa, nke Daniel na Fermín kwụpụrụ. Nwa okorobịa bụ Julian Sempere rụkwara ọrụ dị mkpa, n'eziokwu, ọ na-emecha bụrụ isi ihe ga-esi na akụkọ ahụ pụta.
Labyrinth nke ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ebe a na-eli ozu nke akwụkwọ ndị echefuru echefu
Vladimir Mayakovski. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. Eke